Ugandha: Waxaa socota tirinta codbixinta kadib doorashadii adkeed | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ugandha: Waxaa socota tirinta codbixinta kadib doorashadii adkeed
Dadku waxay isugu soo baxeen koox-koox khamiistii si ay uga dhex muuqdaan doorashadii ay isaga horyimaadeen hogaamiyaha mudada dheer Yoweri Museveni iyo popbien Bobi Wine.
Saraakiisha guddiga doorashada ee Ugandha oo tirinaya waraaqaha codbixinta ka dib doorashooyinka ka dhacay goob codbixineed oo ku taal Kampala [
Dadka reer Ugandha waxay u codeeyeen iyagoo sugaya amaanka oo aad uxun iyo internetka oo madoobaaday doorashadii ay ku tartamayeen hogaamiyaha ruug cadaaga ah Yoweri Museveni iyo muwaadin hore Bobi Wine ka dib markii mid ka mid ah ololihii ugu dhiig daadashada badnaa sanadihii la soo dhaafay.
Codbixinta ka dhacday Kampala waxay ka dhacday iyadoo ay joogaan militariga iyo booliska oo aad u culus khamiistii, iyadoo aan la soo sheegin wax rabshado ah oo ka dhacay isgaarsiinta
Tirinta codadka ayaa socota kadib markii ay xirmeen goobihii codbixinta iyadoo dadku ay isugu soo baxeen si raxan raxan ah si ay calaamadooda ugu muujiyaan doorasho taariikhi ah, oo si kulul loogu tartamayo taas oo la sheegayo in xukunka Museveni si adag loo tijaabiyay.
Safaf dhaadheer oo cod bixiyayaal ah ayaa si dhuumaaleysi ah ku soo baxay goobaha codbixinta ee caasimada, oo ah xarun ay ku xoog badan yihiin mucaaradka waxaana soo jiitay Bobi Wine inkasta oo olole uu hareeyay rabshadaha dilaaga ah.
Waxaa diiwaan gashan 17.7 milyan oo codbixiyeyaal ah waxaana la filayaa in natiijada ay soo baxdo 48 saacadood gudahood. Dadka u soo baxay waxay u muuqdeen kuwo adag, oo ku saleysan muuqaallo laga soo duubay xarumaha cod bixinta oo ay baahiyeen kanaallada TV-ga gaarka loo leeyahay.
Kadib markii ay xirmeen goobaha codbixinta 4-ta galabnimo ee waqtiga maxaliga ah, boqolaal kamid ah taageerayaasha Bobi Wine ee kampala ayaa dib ugu laabtay goobahooda codbixinta si ay uqurxaan baaqiisa oo ah “ilaalinta codka” iyagoo daawanaya tirinta.
Saldhigga uu Bobi Wine ka codeeyay, ciidamada amniga ayaa ka eryay taageerayaashiisa.
Wuxuu soo dhigay Twitter waxyar kadib markii codbixinta la dhammeeyay si uu ugu dhawaaqo isaga iyo xaaskiisa taleefankiisa ayaa xanniba
“Waan ogahay inay tani tahay inay iga joojiso inaan la xiriiro wakiilladayada iyo isuduwayaasha,” ayuu raaciyay, isagoo weydiistay taageerayaashiisa inay feejignaadaan.
Aljazeera’s Catherine Soi, oo warbixintan ka soo qortay magaalada Kampala isla markaana soo xiganaysa gudoomiyaha gudiga doorashada, ayaa sheegtay in howlaha doorashadu si habsami leh u qabsoomeen.
“Wuxuu yiri waxaa jiray xoogaa hakad ah halkaan oo ay dib udhacayso keenida qalabka codbixinta goobaha codbixinta qaarkood, xirmooyinka aqoonsiga ee xarumaha qaar way fashilmeen, laakiin waxaas oo dhan waa lakala saaray,” ayay raacisay.
Codbixinta dhowr goobood oo codbixinta ah kama dhicin oo berri ayaa la qaban doonaa. ”
Saddex goobood oo ay wakaaladda wararka ee Reuters soo booqatay intii ay socotay tirinta codadka, ayaa farxad ka kici jirtay dhalinyaro badan mar kasta oo wakiilka doorashada uu kor u qaado codbixinta Bobi Wine.
Aamusnaan ayaa jirtay markii madaxweynaha magaciisa la akhriyay.
Waan ogahay in Museveni uu had iyo jeer ku dhagan yahay inuu xukunka sii joogo. Markan waxaan sii joogi doonnaa inaan daawanno tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah, ”ayuu yiri Sam Ndaula, oo ah 26-jir iibiya waddada dhinaceeda.
Maalintii Khamiista, booliska ayaa 30-qof ka qabtay hoteelka Africana ee magaalada Kampala iyaga oo lagu eedeeyay in ay abuurayaan xarun isku soo uruurinta aruurinta sharci darrada ah, sarkaal ka tirsan booliska oo goobta ku sugnaa oo diiday in magaciisa la xigto ayaa u sheegay Reuters.
Museveni wali tixgalin weyn ayey ku hayaan dadka waayeelka ah ee reer Ugandha kuwaas oo xasuusta xasiloonida iyo xasiloonida uu ku soo laabtay dalka.
“Dhallinyaradan, waxay doonayaan isbeddel, laakiin ma garanayaan waxa Museveni noo sameeyay,” ayay tiri 58-jir Faith Florence Nakalembe.
Laakiin caruurteeda, oo waliba saf ugu jira Kamwokya si ay u codeeyaan, ayaa si weyn u doonaya isbedel.
“23 sano, waligey ma arag madaxweyne ka duwan. Waxaan rabaa qof kale, ”ayuu yiri wiilkeeda, oo ah 23-jir ardayad ah Sacad Mukoone, oo codkiisa ku tuuraya Bobi Wine gadaashiisa.
Museveni, oo xukunka hayay tan iyo 1986, ayaa sheegay in maamulkiisu uu damaanad qaadayo xasilloonida iyo horumarka, oo ay ku jiraan biyo xireennada korontada laga dhaliyo iyo waddooyinka.
XIGASHO: AL JAZEERA IYO WAKAALADAHA WARKA
Previous articleUganda: Vote count under way after hotly contested election
Next articleSiyaasi Cabdirmaan Cabdishakuur oo si adag yga hedlay Go doominta Gobolka Bakool kuna baaqay
Deg Deg Maleyshiyaad Kasoo Jeeda Caabudwaaq oo Sedex Haween ah kasoo Afduubtay Deegaano Hoostaga Cadaado
Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo markii ugu horraysay bixiyey ruqsadda adeegga lacagaha taleefanka (Mobile Money Transfer)
Bangiga dhexe ee Soomaliya oo bixiyey Ruqsada kacagta miobeelada leysqga diro
kala Carar ka dhacay Wadada KM4 goor dhawayd kadib markii lagu arkay gaari looga shakiyay Qarax Halkaas
Sucuudiga oo waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixintii ka soo baxday sirdoonka Mareykanka oo lagu sheegay in dilkii loo geystay Wariye Jamaal Khaashuqji uu...
Kooxo Hubeysan oo goor dhawayd Suuqa Xoolaha Xaafada Holwadaag B/weyne ku dilay askari Qorigiina ka qaatay..
Kulan ay garwadeen ka ahayeen (Qooqoor) iyo Cabdi Qeybdiid oo fashilmay,...
axmed shiikh - February 24, 2021 0
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulan la sheegay in uu fashil ku dhamaaday, kaasi oo ku aadanaa sidii loo baajin lahaa bannaanbaxa...
Mucaaradka Jabuuti oo ku eedeeyay dowladda inay kula kaceyso caburin
Madaxweynaha Jabuuti Geelle oo dalka Fransiiska kulan kula qaatay Madaxweynaha Faransiiska...
War deg deg ah: Ciidamo uu hoggaminayo Gen. Indha-cadde oo caawa...
Sucuudiga oo waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixintii ka soo baxday...
Qarax ay askar ku dhinteen oo ka dhacay Koofur galbeed dalka...
axmed shiikh - February 27, 2021 0
kala Carar ka dhacay Wadada KM4 goor dhawayd kadib markii lagu...
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay diyaaradaha Mareykanku...
axmed shiikh - January 20, 2021 0